नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरी स्थगित — Imandarmedia.com
नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरी स्थगित
काठमाडौं । दल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ । नेकपाले बाढी र पहिरोमा परेकाहरुको राहत र उद्धारमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बाढी पहिरोमा परेकाहरुको राहत र उद्धारमा जुट्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । साथै सरकारलाई पनि राहत र उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरेको छ ।
बैठक साउन १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित थिए । स्थायी कमिटी बैठक अघि ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
आजको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित थिए। यसबारे पत्रकारहरूको प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्य कामले गर्दा प्रधानमन्त्री थकान लागेकोले बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताए।
बैठक बस्नुअघि अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा आज स्थायी कमिटीको बैठकमा के गर्ने? भन्ने सन्दर्भमा नै कुराकानी भएको श्रेष्ठले बताए।
पार्टीभित्र देखिएका विवादबारे छलफल जारी नै रहेको र कुनै सहमतिमा नपुगेको उनको भनाइ छ । स्थायी कमिटी बैठक छ महिनासम्म चल्ने हो? भन्ने प्रश्नमा उनले वर्षाले एक साता पर धकलिए पनि गृहकार्य भइरहेकोले छिट्टै बैठक टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिए।